युवतीहरुले एक रातमा कति पटक शारिरिक सम्पर्क राख्न सक्छन् ? अबस्य हेर्नुहोस् - Pradesh Dainik
युवतीहरुले एक रातमा कति पटक शारिरिक सम्पर्क राख्न सक्छन् ? अबस्य हेर्नुहोस्
सोमबार, बैशाख २२, २०७७ , प्रदेश दैनिक संवाददाता
शारिरिक सम्पर्कका विषयमा मानिस खुलेर कुरा गर्न नसके पनि यो विषयमा जान–अञ्जान चासो भने बढी नै राख्ने गर्छन् । यस विषयलाई लज्जाको विषय ठान्नेहरु पनि लुकीलुकी यसकै विषयमा जान’कारी लिन लालायित भेटिन्छन् ।
यसैले त शारिरिक सम्पर्कको विषय विश्वका लागि अध्ययन्को विषय बन्ने गरेको छ । यसमा विश्वमा धेरै अध्ययन् अनुसन्धान भएका छन् र अनौठो तथ्यहरु बाहिर आएका छन् ।योनी जति संवेदनशील हुन्छ स्तनको टुप्पो पनि त्यस भन्दा कम हुँदैन हुन त यो यथार्थ जान्ने र भोग्नेहरुले थाहा पाएकै कुरा हो । तर, किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भने हालै मात्र वैज्ञा’निकहरुले पत्ता लगाएका छन् ।
अमेरिकाको रट्जर्स विश्व विद्यालयका अनुसन्धान कर्ताहरुले गरेको अध्ययनले महिलाहरुको स्तनको टुप्पो र योनीमा हुने समान संवेद नशीलताको कारण यी दुई अङ्गबाट प्रसार हुने संवेदना मस्तिष्कको एउटै भागले ग्रहण गर्नु हो । योनी र भग्निशिखाको स्पर्शका बेला उत्पन्न हुने उत्तेजनालाई मस्तिष्कको जुन भागले ग्रहण गर्छ स्तनको टु’प्पोको स्पर्शका बेला उत्पन्न हुने उत्तेजनालाई पनि सोही भागले ग्रहण गर्ने गर्छ ।
त्यसैले केही महिलाहरु स्तनको स्पर्श वा सुम्सु’म्याइबाटै चरम आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने अनुसन्धान कर्ताहरुको भनाइ छ अर्थात् स्तनमा हुने यही संवेदनाको सञ्चार र स्नायु सम्बन्धका कारण स्तनको भरपूर स्पर्श’ले मात्र पनि महिलाले चरम आनन्द प्राप्त गर्न सक्छिन् ।
आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धान कर्ताहरुले २३ देखि ५६ वर्षसम्मका ११ जना महिलालाई उनीहरुको यो’नी र स्त’नलाई सुम्सुम्याउन अह्राएका थिए । यसरी सिर्जना हुने उत्तेजनाका बेला उनीहरुको मस्तिष्कमा हुने परिवर्तनको अध्ययन गर्न मस्तिष्कलाई ब्रेन स्क्यानरभित्र राखिएको थियो । त्यसक्रममा प्राप्त तस्वीरहरुले योनी र स्तन दुबैबाट प्रवाह हुने उत्ते’जना स्नायु हुँदै मस्तिष्कको क्लस्टर अफ ग्रेप्स भन्ने ठाउँमा गएको पाइयो । पुरुषमा पनि लि’ङ्गबाट प्रवाहित हुने उत्तेजना सोही भागले ग्रहण गर्ने गर्छ । यसरी समाउँदा बढी भन्दा बढी आनन्द आउँछ ।
विज्ञहरुले गरेको अनुमानलाई हेर्ने हो भने एक वयश्क पुरुषले एक रातमा कति पटकसम्म शारिरिक सम्पर्क गर्न सक्छन् भन्ने अझै पनि एकिन भन्न सकिन्न । तर, एक स्वस्थ तथा वयश्क पुरुषले चरम सुखानुभोगको आधारमा उसको मात्रा तथा तथा गन्ती गर्न सकिन्छ । पुरुषहरु म’दिरा सेवन गरेको अवस्थामा यो अवस्था दोहो¥याउने गरेको पाइन्छ ।
अन्य अवस्थामा यो मात्रा कति हुन्छ त रु अण्डकोष अति नै संवेदनशील हुन्छ, औंलाका टुप्पाहरुले अण्डकोषमा बिस्तारै प्रेमस्पर्श गर्नाले, जिब्रोले अण्ड कोषलाई स्पर्श गर्नाले र सामान्य सोही अङ्गलाई हातले हलचल गराउनाले तपाईंले तपाईंको पुरुष पार्टनरलाई चरम उत्कर्षमा लैजान सक्नुहुन्छ । तर याद गर्नुहोस्, तपाईंका प्रत्येक स्पर्ष अति नै नरम र सरल हुनुपर्छ किनकी छा’लाले नै तपाईले दिएको प्रत्येक झड्कालाई मष्तिष्कसम्म पुर्‍याउने काम गर्दछ ।
अण्डहरुलाई जोशमा कहिले नि थिच्ने अनि चेप्ने गर्नु हुँदैन जसले पुरुष मित्रको जोशलाई तत्काल नै खत्तम गरिदिन्छ । आफ्नो मित्रलाई सधैं सोध्नुस् कि तपाईंलाई उनको स्तन चु’स्नका लागि अनुमति छ कि छैन । किनकी त्यो सबैलाई मन नपर्न सक्छ ।
मञ्जुर भएको खण्डमा जिब्रोको टुप्पोले सुस्तरी स्तनको मुन्टोलाई खेलाउनुहोस् । यो गुद्वार र अण्डकोष बीचको भाग हो । औंलाहरुले उत्सर्गतरालको बीच भागमा हल्का दबाव दिनु्स् । तत्पश्चात तपाईंले लामो समयसम्म आफ्नो पार्टनरलाई मज्जा लिन–दिन सक्नुहुन्छ ।
यस्तै डाक्टरहरु बारम्बार चेतावनी दिईरहेका छन् कि, कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि अनुहार नछोऔँ । तर हामी अन्जानमै भएपनि बारम्बार आफ्नो नाक, कान, मुख, आँखामा हातले छोईराख्छौँ । नचाहँदा नचाहँदै पनि हाम्रो हात अनुहारमा गईरहेका हुन्छ । अझ विज्ञानले अनुहार छुनु मानिसका लागि स्वभाविक प्रतिक्रिया भएको बताएको छ ।
विज्ञान भन्छ, हामी हरेक घण्टामा २३ पटक आफ्नो अनुहारका बिभिन्न अंग, आँखा, कान, नाक र मुखमा छुने गर्दछौँ । यस कारणले नै अहिलेसम्म अधिकांश मानिसहरुमा कोरोनाको संक्रमण भएको शोधबाट पत्ता लागेको छ । यो कुराको खुलासा अमेरिकी डा। न्यान्सी सी। एल्डर, डाक्टर विलियम पी। सायर र
अष्ट्रेलियाकी डा।म्याक्लाव्सले आफ्नो अध्ययनमा धेरैजसो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हातले अनुहार छुँदा भएको पत्ता लगाएका हुन् । तीनैजना डा। फेस टचिङमा स्टडी गरिरहेका छन् । हामीलाई अनुहारमा छुन हुँदैन, छोयो भने कोरोनाको खतरा छ भन्दा भन्दै पनि किन अनुहारमा हात पुर्याइरहन्छौँ रु यस बारेमा मनोवैज्ञानिक हरु भन्छन्, यदि कसैलाई पनि कुनै पनि काम गर्नबाट रौक्यो भने त्यसलाई त्यहि काम गरिरहन मन लाग्छ ।
उसको दिमाग नचहँदा नचाहँदै पनि त्यो काम गर्न थाल्छ । त्यसैले सानै दखि लागेको बानी हटाउन धेरै कठीन हुने गर्दछ । त्यसैले मानिसहरुले यस्तो बानी छोड्न सक्दैनन् । १ घण्टामा १९ पटक अनुहार छुने गरिन्छ पोर्टल्याण्डस्थित ओरेगन हेल्थ एण्ड साइन्स युनिभर्सिटीमा फेमिली मेडिसनकी प्रोफेसर डा। न्यान्सी सी एल्डर भन्छिन्, आँखा, कान र नाक छुनु मानिसको सबैभन्दा नराम्रो लत हो ।
आँखा मिच्नु, नाक चलाउनु, गाला तथा निधारमा हातले छुनु यो नराम्रो बानीमा पर्दछ । डा। न्यान्सीले आफ्ना क्लिनिक स्टाफहरुम ध्ये ७९ जनालाई २ घण्टाका लागि एउटा कोठामा राखेकी थिइन् । उक्त अध्ययनमा उनले १ घण्टामा ति मानिसहरुले १९ पटक आफ्नो अनुहार छोएको पत्ता लागेको थियो । तर सिड्नीस्थित साउथ वेल्स विश्वविद्यालयमा महामारी तथा संक्रमण विषयका प्रोफेसरले सन् २०१५ का फेस टचिङ नामको एक स्टडी गरेका थिए ।
स्टडी गर्ने डाक्टर म्यारी लुईस भन्छिन्, ‘मेरो रिपोर्ट कोरोनाको यस घडीमा आएर काम लागेको छ । मैले यो रिपोर्ट २६ विद्यार्थीहरुको आधारमा तयार गरेकी थिएँ, जसमा विद्यार्थीहरुले एक घण्टामा २३ पटकसम्म आफ्नो अनुहार छोएका थिए ।’
पोखराका सुजन सुवेदीले जिते हिमालय रोडिज
घुँगी खोज्न हिँडेका पुरुषको पैनीमा डुबेर मृत्यु
समुदायस्तरमा कोरोना फैलन नदिन १० दिनका लागि रतुवामाई शिल
कोशी अस्पतालमा मृत्यु भएका उदयपुर बेलकाका पुरुषको कोरोना रिर्पोट नेगेटिभ
नेकपा विवाद : गौतम निवासमै पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डले भेटे उपाध्यक्ष गौतमलाई
सुन्दरहरैँचा पनि लकडाउन गर्ने निर्णय, अत्यावश्यक काम बहेक सबै बन्द